Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Jereo ny mahavariana ny seranam-piaramanidina Frankfurt
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny ivontoerana mpitsidika vaovao Fraport hisokatra amin'ny 2 aogositra izao, miasa indray izao ny Terrace mpitsidika sy ny fitsidihan'ny seranam-piaramanidina.
Ivotoerana mpitsidika haino aman-jery vaovao izay hisokatra tsy ho ela ao amin'ny Concourse C an'ny Terminal 1.
Hanomboka indray ny fitsidihana seranam-piaramanidina malaza amin'ny voalohan'ny volana Aogositra.
Ny "windows windows" dia mampiasa zava-misy virtoaly mba hamenoana ny panorama apron miaraka amin'ny angon-drakitra momba ny fiaramanidina mijanona.
Seranam-piaramanidina Frankfurt mahazo manintona iray hafa: ivontoerana mpitsidika haino aman-jery vaovao izay hisokatra tsy ho ela ao amin'ny Concourse C an'ny Terminal 1. Io toerana vaovao io dia mametraka ny tontolo mahaliana ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra any Alemana eo am-pelatanan'ny mpitsidika. Fotoana iray ahafahan'ny mpankafy seranam-piaramanidina amin'ny sokajin-taona rehetra hijery ny orinasam-piaramanidina miaraka amin'ny sain'izy ireo rehetra. Ahoana ny fandehanana mankany amin'ny andraikitry ny marshaller ary ny fitarihana jet mankany amin'ny toeran'ny fijanonany? Azonao atao eto! Sa mamakivaky ireo tionelina miolakolaka an'ny rafitry ny mpampita entana amin'ny seranam-piaramanidina? Apetraho fotsiny ny headset virtoaly virtoaly ary atombohy ny Motion Ride mampihetsi-po! Ny ivon-kevitry ny fampirantiana, The Globe, dia ahafahanao miaina ny sidina manerantany amin'ny hetsika - ary hianatra ny anjara asa lehibe ananan'ny seranam-piaramanidina Frankfurt ao.
Ny lalana mamakivaky ilay fampirantiana mirefy 1,200 metatra toradroa dia asehon'ny tsipika manjelanjelatra izay mifanandrify indrindra amin'ireo lalan'ny fiaramanidina goavambe hivoahana sy hidina. Teo am-piandohana, maodely 55 metatra toradroa an'ny City Airport (amin'ny ambaratonga 1: 750) dia manasa ny vahiny hiroso amin'ny dia virtoaly hahitana. Ity kopian'ny antsipirian'ny seranam-piaramanidina iray manontolo ity sy ireo tranony 400-hafahafa dia azo zahana miaraka amin'ny iPad. Tombontsoa nomerika 80 mahaliana kokoa no manome fampahalalana mahaliana amin'ny endrika lahatsoratra, horonan-tsary ary sary mihetsika 3D. Ny "windows windows" dia mampiasa zava-misy virtoaly mba hamenoana ny panorama apron miaraka amin'ny angon-drakitra momba ny fiaramanidina mijanona. Ny tantara mahavariana momba ny zeppelins sy ny Berlin Airlift dia azo atao ihany koa mandritra ny dia miverina taloha.
"The Globe", rindrina LED goavambe mifandraika amin'ny efijery fanaraha-maso 28, mampiseho ny sidina mitohy manelanelana ny FRA sy ny teboka hafa manerantany amin'ny fotoana tena izy. Ity dia fomba mahavariana iray miaina ny tranonkala mampitohy ny fifandraisana manerantany sy ny fahasarotan'ny fiaramanidina iraisam-pirenena.
Hanomboka indray ny fitsidihana seranam-piaramanidina malaza amin'ny voalohan'ny volana Aogositra. Ny Tour Starter dia maharitra 45 minitra ary misy fitantarana mivantana hanomezana tarehimarika mahavariana isa, data ary zava-misy eny amin'ny seranam-piaramanidina sy ny hetsika ataony. Ny Tour XXL maharitra 120 minitra dia manome fijery misimisy kokoa ao ambadiky ny sehatra. Ny mpitsidika dia afaka mijery ny fizotran'ny fikirakirana ny tany, ny fialan-tsasatra ary ny fidinana an-tanety rehefa mandalo akaiky ny fiaramanidina, ary koa mahita ny tobin'afo vaovao 1 sy ny tetik'asa fananganana Terminal 3 vaovao atsimon'ny seranam-piaramanidina.
Ny fomba tonga lafatra amin'ny fitsidihana fitsangatsanganana mankany amin'ny seranam-piaramanidina dia ny mankafy ny fomba fijery avy ao amin'ny Terrace mpitsidika malaza. Ity lampihazo ao amin'ny Terminal 2 ity dia manome fomba fijerin'ny voronkely eran'izao tontolo izao miantsona sy miainga ary ilay hetsika be olona eo amin'ny aprônan'ny seranam-piaramanidina. Mba hankalazana ny fisokafany indray dia tsy andoavam-bola mandritra ny fotoana voafetra ny fidirana - mba hametahana ny isan'ny mpitsidika amin'ny fotoana rehetra, na izany aza, ilaina ny mitahiry toerana misy fotoana.
Ny famandrihan-toerana dia takiana amin'ireo fampitaovana rehetra ary azo atao ao amin'ny fivarotana tapakila ao amin'ny www.fra-tours.com. Mampalahelo fa mbola tsy azo atao izany amin'ny tranokala. Mandritra ny fialantsasatry ny sekoly fahavaratra any amin'ny fanjakan'i Hesse any Alemanina, ireo mpitsidika ny Visitor Center dia afaka mijanona maimaimpoana ao amin'ireo toeram-piantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka FRA: maka tapakila fotsiny rehefa mitondra fiara ary manamarina izany eo am-baravaran'ny Visitor Center. Ho an'ny mpitsangatsangana an-tsokosoko ihany, dia serivisy mendrika foana ny seranam-piaramanidina Frankfurt - ara-dalàna raha manaraka ny lalàna ankehitriny hisorohana ny aretina.
Zava-dehibe ho fantatra: toy ny Terrace mpitsidika, ny foibe fampahalalana vaovao Fraport Visitor Center dia azo amandrihana ihany koa amin'ny fanaovana hetsika isan-karazany.